Wararkii u dambeeyey xaalada Magaalada Beledweyne. | Warbaahinta Ayaamaha
Wararkii u dambeeyey xaalada Magaalada Beledweyne.
BELEDWEYNE-AYAAMAHA-Ciidamo hubeysan ayaa magaaladu saaka u kala xiran tahay, waxaana lasoo sheegayaa in qayb ka mid ah magaalada ay ku sugan yihiin Ciidanka Nuur dheere, kuwaasi oo fariisin ka sameysaty Stadium Laqanyo oo dhaca duleedka bari ee Beledweyne.
Ciidamada dowladda oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Jeyte aysan ku sugnayn gudaha magaalada, waxaana ay ku suganyihiin deegaanka Qowlad oo qiyaastii 9-Km dhanka waqooyi ee Beledweyne.
Xaafadda Kooshin ee Beledweyne,waxaa ku sugan Ciidamo aad u farabadan oo uu hoggaaminayo Generaal Abuukar Xuud, kaasi oo sida lasoo sheegayo fariisimo ka samaystay xaaafadda uu kaga sugan yahay magaalada, kaasi oo maamulka gobolka Hiiraan ay ku eedeeyay in uu weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo u socday hawlgal ka dhan ah ururuka Al-Shabaab,inkastoo uu beeniyay arrintaasi kadib wareysi uu bixiyay.
Dadaalada Odayaaasha ayaa la soo sheegayaa in ay tahay talaabada ugu horreysa ee dagaalkaasi looga baaqsan karo, waxaana Haddii wada-hadalka odayaasha wadaan uu guul dareesto laga cabsi qabaa in mar kale uu magaalada Beledweyne ka dhaco dagaal sababi kara qasaare kala duwan.